Vakanaka kwazvo Mabhuku
Tino Ongorora Sei iyo UK Yakanyanya Kubheja Siti?
Yedu yekuongorora maitiro ndiyo ine simba zvakanyanya pamusika. Isu tinopfuurira nenzira iyo iri kusaina-up, isa mari, mari Outs, mhando yekubheja uye kubheja kugadzirisa kuti ive imwe yechokwadi chiitiko kubva kutanga kusvika kumagumo.
Haasi zvachose masheji emubhuki ari kubheja akafanana. Vamwe vanozove vakasimba pakumhanya kwemabhiza, vamwe pa nhabvu, imwe inokosha mune tenisi, tennis uye cricket uye vamwe pamisika yemisika nezvematongerwo enyika.
Isu tine tarisiro yekuwana iyo saiti dzakanakisisa dzinobatanidza zvinhu zvese, wedzera mutengo kune chako chiitiko uye tamba zvakanaka chero nguva zvakanyanya kufunga nezvevatengi basa uye kuchengeteka. Iwe unogona kunge uri hongu kune marezinesi zvachose neBritish Kubhejera Commission. Mikana ndeyekuti haisi kungounza mutserendende mukuwedzera ivo havafanire kuwana bhizinesi kana vasingafanane nezvinangwa zvechikwata chenyu nyanzvi.. Izvi ndizvo zvatinovimbisa kuti zvakafukidzwa:
Yakawedzera bhonasi inopa uye mabheti ayo emahara
Mukati memusika unokwikwidza unogona kutarisira fungidziro yebhizinesi rako nekuwedzera iko kudyidzana kwekutanga pamwe chete newako new nzvimbo kubhejera inofanirwa kuve inogutsa. Isu tinokuya mamiriro uye mazwi akabatanidzwa nechero kupi izvi zvirokwazvo kusaina-kumusoro dhipoziti yekuwedzera kana yemahara kubheja kuti uite zvimwe ive yechokwadi uye inowanika kune vanhu vanoda kuitora kumusoro. Isu tinofukidza zvinodiwa pakurasa, hunhu hunokodzera uye uchipa ruzivo iwe waunoda kudzivirira chero kuvhiringidzika. Hapana chinhu chinonyanya kushungurudza kupfuura kuwana izvo zvawakanyorera uye semhedzisiro yetimu yenyanzvi dzezvemaindasitiri tinoona kuti hazviitika.
Iko kune chokwadi kunongedza izvi zvirokwazvo kuri kuita zvishoma uye zvinosanganisira mutsva wekubheja uye kuti usazokwanisa kuisa kubheja pane chimwe chinhu chaunogona kubheja nevamwe kwete kubhuki rako.. Sarudzo yemusika yakakosha kwazvo kwatiri uye zvakare inofanirwa kuva kwauri. Nzvimbo yedu yakakurudzirwa inounza sarudzo uye yekuwana mukati merudzi rwese, kuburikidza neCheltenham Mutambo mukumhanya kwemabhiza kuenda kumatora ezvematongerwo enyika, terevhizheni inobata zviitiko zvepamberi-nguva zvinoitika.
Kushaikwa kuri kuenda ne online bookies ndizvo chaizvo izvo punters vauya kutarisira kubva akanakisa online nzvimbo vari kubheja chikuru Britain. Idzo nguva dzekuti ufonere foni kana kuda kuti ubate mugwagwa uyu zvechokwadi izere zvitoro, kuzadza svutugadzike uye kumirira yakamira kumusoro kwaenda. Mazuva ano vatungamiriri vanotungamira vari pairi kubheja vane mafoni akakurumbira emapeji ewebhu uye zvakadzama smart application ayo anokutendera kubhejera kamwe chete kana kaviri kana kupi zvako kwaunoda, chiratidzo chinobvumira! Isu tinoedza ruzivo rwe cellular takanangana neiyo yakamisikidzwa uye ikozvino tinokuzivisa iwe kana isiri kuburitsa.
Mumakore mashoma apfuura maitiro ekuisaina saiti yekubheja paInternet kuwanikwa kwebhuku rinopa izvo zvakanyanya kunaka zvave zvakanyanya kunetsa asi zviri mukati menyasha dzevatengi.. Kuita maitiro ehutengi hwevatengi pakutanga kwekujoinha webhusaiti nyowani yekubheja yakagadziriswa, nekukurumidza uye kwakachengeteka uye kana apedza anotendera iwe kuti ubve nekukurumidza, shandisa yakawanda yekubhadhara nzira, wana mukana wekuwana zvirinani uye unzwe wakachengeteka mubook rako rakasarudzika kuhukama hwako.
Tarisira kuti iwe uchapa ruzivo urwu ruri kuomerera kune zvishoma uye chero chinhu chakadai chakakosha kana chakasiyana chinoratidzwa zvachose mukati medzidziso yedu:
Yakazara Zita uye Kero nePosheni Code
Chengetedzo Mibvunzo - moms Maiden Name / Kutanga Pezita zita etc
Uchapupu hwekero / bhiri reimba mukati memwedzi mitatu iro rinonyatsojekesa chaunoda uye zita rako
Payment process Details - Chikwereti / Debit Kadhi kana eWallet ruzivo rwekutanga dhipoziti iri rakakodzera
Nhasi uno ruzivo rwese rwapihwa- iri iro rakananga zvinyorwa zvewebhu kusvika kune yakachengetedzwa portal mukati mewebsite webhusaiti iri kuita zvakananga. Tsigiro yeVatengi inogona kusimbisa mutengesi nhoroondo mumaminitsi nekuwedzera iyo yekumirira kuve yakazara mutengi inoshanda zvakakwana chero chinhu chekare nemasiti anobatsira.
Kuchenjera kuve neruzivo rwakapihwa ruzivo kuti rwuite pakunyora. Kana iwe uchida kuiburitsa paunenge uchigadzira kubvisa kunotevera kukunda, sevamwe vatenderi vanobvumidza, chiitiko chinofinha pese paunoda kuita ipai muhomwe zvibodzwa zvako.
Nzira dzekubhadhara uye sarudzo dzebhangi
Usave nesarudzo dzakawanda dzakatove dzichiwanikwa kuUNITED UMAMBO kubheja vatengi pese paunogadzira internet account iri kuger. Isu iri tsika dzepamhepo internet maererano neChikwereti uye Debit Makadhi achiri iwo mhedzisiro inoshandiswa zvakanyanya, sezvaungatarisira. Nekudaro idzi nguva dzizere dzekushandiswa eWallets sePayPal, Skrill, Neteller pamwe nedzimwe sarudzo dzichangobva kuwanikwa dziripo uye dzinowanikwa nevazhinji vanoshanda netaneti.
Yedu yakadzama Sportsbook inoongorora ruzivo idzi sarudzo dzakazara pachena kune yega yega webhusaiti yekubhejera inokurudzira. Isu tinotsanangura izvo zvisingabvumirwe iri kuisa mari uye nguva yekubatika pane imwe mhinduro uye kuti ungaenderera sei kana iwe uchida kuchinja kubva pane imwe uchienda kune imwe.
Isu tinoyeukawo kutanga kufunga nezvesarudzo imwe neimwe sechibatiso chiri kutanga munhu. Vamwe vanopa vanobvumidza eWallets sechipo chekutanga asi hazvizokodzere dhipoziti iro bhonasi-kumusoro bhonasi, yemahara kubheja kana dhipoziti mutambo uye zvakare ichi chinhu chimwe chinhu kuziva pane chero kusaina uye kuisa yako yekutanga wager.
Isu tine hanya chaizvo izvo vatengi kuve varipo vevanozivikanwa vanozivikanwa kubhejera nzvimbo isu tinoongorora uye tinotyora zvese zvakananga pasi apa paKubhejera.com.
Boka redu revadzori rinotora nguva yekutarisa maforamu, edza iyo yevatengi sevhisi uye tarisa mukati mekurwadziwa zvinhu izvo vatengi varipo nevanoshanda mukubheja. Iwe unogona kuvimba nesu kuti tidzidze uye zvakare maonero pamusoro payo kana chiri kusimudzira chisina kuuya, chinhu chitsva chinhu chinosangana nematambudziko etiyething, kana pamwe bheti rinopokana iro risina kubatwa nemazvo.
Isu nekuwedzera tinotarisira kuti tionge zvakakwana zvinhu zvakakwirira zvezvinhu izvi, iyo saiti ndiyo inokurumidza kubatsira mutengi, ine inonyanya kubatsira yekukurukurirana ino inguva chaiyo yakanakira kupfuurira kubatsirwa pamwe neiyo yakanyanya nzira yekuziva kune mushandisi ruzivo. Vatengi vazvino vari chaizvo gwara iro rakakura iro zita remhando rinogona kunge richikodzera iwe zvakanyanya nyore saka tinotora izvo kumoyo wako wekurumbidza.
Kubatsira uye kuchengeteka
Tine chokwadi chekuti webhusaiti yedu yekubhejera inopa zvakachengetedzeka inobhadharisa mubhadharo, gwaro rekuchengetedza nzvimbo, nhoroondo yekushambadzira uye zvakavanzika. Tinoedza yavo chaiyo rutsigiro, yavo chaiyo mhinduro imwe nguva kushanda mukushanda newe kamwe mutengi mune yakazara yakasimbiswa uye, zvinonyanya kukosha, inorongeka uye nharaunda inotenderwa.
Mitemo uye rezinesi
Wese webhusaiti imwechete iyi zvechokwadi kubhejera kukurudzira kwakazara kunatsidzirwa nekuda kweBritish Kubhejera Commission. Tinoratidza nhamba dzezinesi, zvinyorwa zvemakambani, ruzivo rwekutsigira kwevatengi uye zvese zvaunoda kuti unzwisise kuti ndeupi unongotaura chete neakachengeteka & emitambo yakawanda iyo inojekesa opareti sarudzo kushandisa internet. Ivo vanongo svika pakuonekwa pane yedu saiti kana vasingafanani.
Mikana uye mitengo
Kune vamwe, kukwikwidza kwakabatana nemitengo uye mikana yakapihwa nashebhuki chikonzero ichi chiri kungo kubheja nemutengesi mumwe pamusoro pemumwe.. Musika weUK unokwikwidza zvine mutsindo uye kusiyanisa mukati mengozi yechiitiko icho chiri chimwe chinotyisa. Ndokusaka kazhinji ichibhadhara kune yako yakawanda account. Kuve nemishumo yakati wandei kunogona kubatsira zvakanyanya iwe kuisa pamhepo kana iwe uchida kuwana iyo yakanyanya kubatsirwa mutengo kune yega kubheja.
Funga nezve mamiriro akafanana kana pamwe iwe waive uchitenga online nekuda kwechinhu ichi zvirokwazvo chakanyanya. Mutengo waro unogona kusiyanisa kumashopu akasiyana online uye kuti iwe unofanirwa kuita apo dzimwe nzira dzakasiyana siyana dzinogona kuwanikwa pane zvaunoda kana uchinge washandisa kushandisa mari shoma kuti uwane chigadzirwa nekukurumidza kana kutowana zvinhu zvekuvimbika pane imwe sokisi., ichiri sarudzo yakakosha.
Kubheja pamhepo zvakanyanya kuenzaniswa. Pese painonyanya kubatsira mikana Yakavimbiswa kana Kuwedzeredzwa ingangove inopihwa nevanoverengeka vashandi vepa internet, Vanoongorora vanoedza kuita kuti vatenge izvi zvechokwadi kurasa internet yedu yakakurudzirwa masosi maererano nemitengo yavo nemikana. Vanozadzisa mukati kwakanaka kanenge kese nguva chaiyo uye vanovavarira kutungamira sei nemisika yose yakajairika uye inotarisirwa?
Maonero edu anotarisira izvi uye anokupa iwe ruzivo iwe wauchada kuita sarudzo iyi ineruzivo chaizvo. Kunyange zvakadaro, hapana chinotsiva pakuita tsvakiridzo yako uye kuva nevashandisi vanogona kuve vanoverengeka kwauri kubva kunhamba yedu yepamhepo yekubheja yakanakisa.
Online kutenderera sarudzo
Kubheja kunogona kuve kunakidza kwazvo izvi ndizvo chaizvo. Kunyange zvakadaro, zvinogona kutora kubva mune zvakaitika kana iwe uri kuenda uye usiri kuona mhedzisiro inoitika. Mazhinji masaiti ewairesi nhasi anopa sarudzo yekuona chiitiko ichi nerukova rwunorarama iwe waisa wager. Iyo mhedziso shoma iyo ndeye mashoma ekutemerwa asiwo newager yezvakangoita 50p, unogona kutarisa kunokonzerwa nokubheja kwako kunoitika panguva yaunobatanidzwa kusvika pakupera.
Izvi zvingave zvakakosha kwauri kuti uve nechokwadi chekuwana yedu yepamoyo inofamba zvakanaka kubhejera internet masayiti ayo anopa iyi mhinduro uchishandisa wakachenjera kwazvo mutengi ruzivo. Kune akawanda ekusarudza kubva uye zvakare hunhu hunosiyana kubva pasiti kune webhusaiti.
Iyo nyaya iyi zvirokwazvo yakanyanya kutarisana nehumwe hwakabatana kubheja vateereri vanowana chaiyo yevatengi ruzivo rwavanoshuvira kubva kune internet kubhejera saiti. Ichava iyo mitambo yaunoda kubheja pane iri nyore basa kuenda, anoita oparesheni akaisa sarudzo mukati mechokwadi nzira inoita kuti uwane zvaunoda nekukurumidza uye zvakanaka?
Iwe unogona here kuongorora mabheti ako, tarisa purofiti yako uye kurasikirwa kana kutora yekutanga mari kunze kana iwe uchida kushandura pfungwa zvakare zvinongotora kana iwe uchida kubvisa zvingangoita nguva yakareba sei?
Izvi ndizvo zvakakoshera pamwe nekutarisa kwakakura kuchikwata chedu chekuongorora kana vangoendesa mutongo wekupedzisira uye chiyero chewebhu webhusaiti iri kubhejera.. Iko kutaridzika uye manzwiro uye chimiro chewebhusaiti chinogona kunge chakanyungirirwa kune mhando ine chokwadi chebetor uye iwe uchaona mukati medzvedu kuongorora kuti vanhu vanocherekedza uye vanzwisise mutsauko.
Kunzwisisa chinhu chaunoda kwakakosha uye kukuziva iwe kunogonesa pane yakanakira nzira inodiwa nevanhu vanogona kubatsira. Ramba uchifunga, ndizvo chaizvo zvaunofarira uye zvimwe hazvisi zvedu - webhusaiti yacho yakatenderedza kutenderera, pamwe kunyange musanganiswa wewebsite mbiri kana dzinoverengeka ndizvo chaizvo zvaunoda kuti uwane chimiro chega chega chakafukidzwa uye kuvhura mabhonasi emahara.
Tora nguva yekuverenga pamusoro pekuongorora kwedu uye uwane iyo yakanakira pane zvaunoda, kubva kune mushandisi ruzivo pamusoro pe mobile parutivi desktop desktop kana piritsi, nzira dzekubhadhara, mhinduro yevatengi uye maitiro ekuzvipira, bhonasi iri kupiwa apo nzvimbo uye mutengo.